बिरामीको मृत्युपछि विराट नर्सिङ होममा तोडफोड र तालाबन्दी प्रयास, पाँच पक्राउ – Health Post Nepal
बिरामीको मृत्युपछि विराट नर्सिङ होममा तोडफोड र तालाबन्दी प्रयास, पाँच पक्राउ
२०७६ असार ७ गते १९:५४
अस्पतालको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्त तथा स्थानीयले विराटनगरमा रहेको विराट अस्पतालमा तोडफोड गर्नुका साथै केहीबेर गेटमै तालबन्दी समेत गरेका छन् । आक्रोशित भीडले सडक समेत बन्द गर्न खोजेपछि प्रहरीले ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
आक्रोशित आफन्तहरुले गेटमै तालाबन्दीको कारण अस्पतालमा जाने बिरामी, विरामीका कुरुवा तथा आफन्तसमेत थुनिएका थिए । मोरङको सुन्दर हरैचाँ १० कि प्रीति कोइरालाको उपचारको क्रममा शुक्रबार विहान निधन भएको थियो ।
पाठेघरको नलि खोल्ने सामान्य शल्यकृयाको लागि गत बुधबार भर्ना भएकी कोइरालाको पछि निमोनिया र जण्डिस भएर मृत्यु भएको अस्पतालको भनाई छ । अस्पतालका सञ्चालकसमेत रहेका डा. ज्ञानेन्द्रमानसिहं कार्कीको टिमले उनको शल्यक्रिया गरेको थियो ।
मृतकका आफन्तले चिकित्सको लापरबाही कारण मृत्यु भएको दाबी गरेका छन् । मृत्युपछि आफन्तहरु नाराबाजी गरेपछि अस्पतालमा तनावको अवस्था सृजना भएको हो । मृतकका आफन्तले नाराबाजी र प्रदर्शन गरि सडक समेत अबरुद्ध गर्न खोजेपछि प्रहरीले ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
आक्रोशित भीडले अस्पतालको कम्प्युटर, झ्यालको सिसा समेत फुटाएका छन् । उपचारमा संलग्न डाक्टरलाई समेत घेराउ गरेपछि प्रहरीले उनको उद्दार गरेको थियो ।
मृतकका पति गोविन्द कोइरालाले स्कुटर राखेर सामान्य अप्रेसनको लागि आएकी आफ्नी श्रीमती अस्पताल र डाक्टरकै लापर्वाहीले मृत्यु भएको आरोप लगाए ।
बुधबार नै कोइरालाको पाठेघरको शल्यक्रिया भएको थियो । अस्पताल प्रशासनले भने लापरवाही नगरेको दावी गर्दै आएको छ ।
केही दिन अघि अस्पतालमा भर्ना भएकी उनको स्वास्थ्यमा खराबी आएपछि बिहीबार आईसीयुमा राखिएको थियो ।
प्रहरीको आग्रहमा अस्पतालको गेटमा लगाइएको ताला खोलिएपनि अहिलेसम्म आफन्तले शब बुझ्न मानेका छैनन् । घटनाका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा अहिले वार्ता चलिरहेको छ ।
विराट नर्सिङ होम
One thought on “बिरामीको मृत्युपछि विराट नर्सिङ होममा तोडफोड र तालाबन्दी प्रयास, पाँच पक्राउ”
Pingback: विराट नर्सिङ होममा तोडफोड र तालाबन्दी प्रयास, पाँच पक्राउ ! - Public Health Concern